Sintomy ny sary ofisialin'ny iOS 8 sy OS X Yosemite | Vaovao IPhone
Sintomy ny sary ofisialin'ny iOS 8 sy OS X Yosemite
Iray amin'ny asan'i Apple rehefa mamorona rafitra miasa dia ny endriny, ny fomba fandrafetana ireo singa, ny fihetsika ataon'izy ireo rehefa eo ambanin'ny fihetsiky ny mpampiasa izy ary mazava ho azy, ny fahitan'ny mpanjifa azy. Araka ny hitantsika, voalohany, tao amin'ny afisy Moscone Center ary, faharoa, ao amin'ny WWDC 2014 fehezanteny, ny sary ofisialy iOS 8 sy OS X Yosemite ofisialy dia tena tsara tarehy. Eto, ao amin'ny iPad News, atolotray anao ireo sary ho an'ny fitaovanao, fa tsy mila miditra amin'ny tranokala Apple.
Ny sary mihetsika iOS 8 sy OS X Yosemite ho an'ny fitaovanao
OS X Yosemite Wallpaper ho an'ny Mac
OS X Yosemite Wallpaper ho an'ny iPad
IOS 8 Wallpaper ho an'ny iPad
Ireo sary etsy ambony etsy ambony dia havaozina ho an'ny efijery fitaovana rehetra, izany hoe, azo ampiasaina amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny iDevices miaraka amin'ny efijery retina. Andao hofakafakaina kely izay hitantsika amin'ny sary an-tsary tsirairay an'ny rafitra fiasa vaovao:
OS X Yosemite: Amin'ny tranga OS X, Apple dia mampiseho amintsika ny "El Capitan" asan'ny natiora hita tao amin'ny "Yosemite Park" any California. Araka ny hitanao, Apple dia misafidy anarana ho an'ny rafitra fiasa ao California, toa an'i Yosemite sy ilay kinova teo aloha, Mavericks.
iOS 8: Etsy ankilany, ny sary an-tsoratry ny fanavaozana iOS lehibe fahavalo dia karazana ranomasina. Tena tsy fantatsika izay dikan'ity hajia ity, maninona raha manontany ny mpamorona Cupertino? Anan'izy ireo ny valiny.
Manantena izahay fa mankafy ny sary an-tsary rehetra nomenay izahay ary manomboka manomana ny fitaovanao amin'ny fahatongavan'ireto rafitra fiasa vaovao roa ireto amin'ny faramparan'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Sintomy ny sary ofisialin'ny iOS 8 sy OS X Yosemite
Guillermo l. dia hoy izy:
Vao haingana aho no nividy iPad 2, niaraka tamin'ny hagagana fa manana iOS 8.1.3 izy io, ary tsy afaka misintona tambajotra sosialy sasany. Tsy fantatro izay eritreritr'izy ireo amin'ny tsy fampidirana ny whatsapp for iPad miaraka amin'ireo rafitra mandroso kokoa, ho an'izay ampahany tiako kokoa ny Android ... Ny fanontaniako Misy olona eto ve afaka manampy ahy na milaza amiko ny fomba azoko atao hamerenana ny iOS 7.1 hiverina amin'ny iPad 2 misaotra anao hankasitraka azy io .. Fiarahabana avy any Honduras
Valio amin'i Guillermo l.
Ny iPad koa dia ampiasaina hijerena sary vetaveta
Amin'ny iOS 8 dia afaka mamerina sary voafafa tsy nahy isika